သငျသညျ spiro ဒြပ်ပေါင်းများအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှ - APICMO
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိပညာ > သငျသညျ spiro ဒြပ်ပေါင်းများအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါအားလုံး
သငျသညျ spiro ဒြပ်ပေါင်းများအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါအားလုံး
08 / 28 / 2018Posted by: APICMOအမျိုးအစား: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိပညာ0 အကြိုက်များ
တစ်ဦးက spiro ဒြပ်ပေါင်းနှစ်ခုစက်ဘီးကွင်းတစ်ခုတည်းအက်တမ်အားဖြင့်ကပ်လျက်တည်ရှိသည့်အတွက်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝမှာကွင်း၏အဆောက်အဦများသိသိသာသာတူညီသောသို့မဟုတ်မတူညီတဲ့ဖြစ်စေခြင်းငှါ, နှစ်ခုကွင်းဆက်သွယ်ထားသောအက်တမ် spiroatom (လိမ်အက်တမ်) ဟုခေါ်သည်, များသောအားဖြင့်ဒါဟာ (လည်းလိမ်ကာဗွန်အဖြစ်လူသိများ) မှာတန်း4ကာဗွန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှ ထို့အပြင်ဆီလီကွန်, phosphorus ကို, ဒါမှမဟုတ်အာဆင်းနစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ spiro အက်တမ်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦး Quaternary ကာဗွန်အက်တမ်သည်။ အဆိုပါ spiro ဝင်းသီးခြားစီကွင်း၏နံပါတ်ရေးလိုက်ဖို့ကွင်းကိုအသုံးပြုဖို့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလက်စွပ်အရေအတွက်ကလည်း spiro အက်တမ်သူ့ဟာသူပါရှိသည်, နှင့်သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကအရေအတွက်ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်နှင့်အစက်အားဖြင့်ကွဲကွာပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးမော်လီကျူးဝေစုအတွက်အနည်းဆုံးနှစ်ခုကွင်းတစ်ကာဗွန်အက်တမ် (ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုဆီလီကွန်, phosphorus ကို, arsenic, ကဲ့သို့သောအခြားဒြပ်ပေါင်းများအတွက်အခြားအက်တမ်,) ။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုကွင်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှ perpendicular နှစ်ခုလေယာဉ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်: တော်အစားထိုး spiro ဒြပ်ပေါင်းများ chiral ဖြစ်ကြပြီး (optical isomerism ကိုကြည့်ပါ) optical isomers သို့ပြေလည်နိုင်ပါတယ်။ ပုံစံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, propadiene H2C = ကို C = CH2 အရိုးရှင်းဆုံး spiro လက်စွပ်ဖြစ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သော 1,3-propadienediic အက်ဆစ်အဖြစ်သင့်လျော်စွာအစားထိုး propadiene တာတော့တက်ကြွသည်နှင့်နှစ်ခုတာတော့တက်ကြွ isomers သို့ခွဲနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်။
(1) spiro အက်တမ်များ၏အရေအတွက်အရ, spiro ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုတည်း spiro ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခု dispiro တစ်သုံးဆ spiro နှင့် spiro အက်တမ်၏ဗဟုင်တစ်ဦး Multi-လိမ်ဒြပ်ပေါင်းများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
(2) က carbocyclic spiro ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် heterocyclic spiro ဝင်းပါရှိသောခံရဖို့အက်တမ်၏အမျိုးအညီခွဲခြားနိုင်ပါတယ်, နှင့် carbocyclic spiro ဝင်းဖွဲ့စည်းရန်အတွက်ကာဗွန်အက်တမ်သည်အခြားအက်တမ်များကအစားထိုးအခါ, တစ်ဦး heterocyclic spiro ဒြပ်ပေါင်းများကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
(3) လက်စွပ်အမျိုးအစားအရကပြည့်နှက်, သစ်ရွက်, မွှေးကြိုင်နှင့် aliphatic spiro ဒြပ်ပေါင်းများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
(4) ညှိနှိုင်းရေး heterospirocyclic ဒြပ်ပေါင်းများ။ အဆိုပါ spiro ဝင်းအတွင်းရှိ spiro အက်တမ်တစ်ကာဗွန်အက်တမ်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော Si, N ကို, P ကို, Ge နှင့်တူသောအဖြစ်ကိုအခြားဒြပ်စင်များဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ spiro အက်တမ်သတ္တုအက်တမ်သည်ဆိုပါကတစ်ဦးကိုသြဒိနိတ်နှောင်ကြိုးယေဘုယျအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော spiro ဒြပ်ပေါင်းတစ်ညှိနှိုင်း heterocyclic ဒြပ်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
Polymeric spiro ဒြပ်ပေါင်း
အဆိုပါ polymeric spiro ဒြပ်ပေါင်းသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကွင်းအဖြစ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော spiro အက်တမ်တစ်ခုပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နာမတော်ကိုစသည်တို့ကိုတစ်ဦး spiro ဝင်း, di-, tri-, tetra- ... ဖြည့်စွက်စေတဲ့ဂဏန်းနာမဝိသေသန, နာမည်အခါကွင်းအကြားသီးခြားစီတည်ရှိကြောင်း spiro အက်တမ်၏နံပါတ်ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါ spiro ဝင်းအတွင်းရှိအက်တမ်စနစ်တကျရေတွက်ပါပြီ။ တစ်ဦး polyspirocyclic ဝင်း၏ဝေါဟာရများ Terminal ကိုလက်စွပ်ဟုခေါ်ဝေါ်သောတစ်ဦး spiro အက်တမ်, ဆက်သွယ်တဲ့လက်စွပ်မော်လီကျူးတွေနဲ့စတင်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား polyspirocyclic မော်လီကျူးနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော terminal ကိုကွင်းရှိနိုင်ပါသည်နှင့် Multi-spirocyclic ဝင်းတွဲနေကြသည်။ ၎င်းတို့အနက်တစ်ဦးတည်းသာလိမ်အက်တမ်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်နေသည်။ terminal ကိုလက်စွပ်အတွက် nomenclature, အ spiro အက်တမ်မှလာမယ့်အက်တမ်များကအစပျိုးအရေအတွက်ကို 1 အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်, နှင့်မော်လီကျူးထို့နောက်မော်လီကျူးတွေနဲ့စတင်ရေတွက်သည်။
နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော terminal ကိုကွင်း, terminal ကိုလက်စွပ်၏စတင်အရေအတွက်ကအခြားရွေးချယ်ရေးနည်းလမ်းရပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးဆုံး spiroatom ရေတွက်သောအခါနောက်ဆက်တွဲ spiro ဒြပ်ပေါင်းများကိုအသေးငယ်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှလိမ်ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။ နံပါတ်။ နှစ်ခု terminal ကိုကွင်း,6အက်တမ်နှင့်အတူ 8 အက်တမ်နှင့်တသားတနှင့်အခြားတစ်ဦးဝင်းရှိဆိုပါစို့။ စာရငျးပြီးနောက်, spiroatom6ရေတွက်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါစာရငျး,6အက်တမ်၏လက်စွပ်နှင့်အတူစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်စွပ် 8 အက်တမ်စတင်ပါဝင်သည်ဟုလျှင်, spiroatom 8 ရေတွက်ပါလိမ့်မည်။ အရေအတွက်ကို၏ညှနျကွား spiroatom (ထိုပြီးသားရေတွက် terminal ကိုလက်စွပ်၏ပထမဦးဆုံး spiroatom မှာစတင်) ကဆုံးဖြတ်သည်။ အဆိုပါခရုအက်တမ်တဦးတည်းဦးတည်အရအေတှကျစတင်သည်နှင့်အရေအတွက်ကအခြားဦးတည်ချက်အတွက်အရေအတွက်ထက်လျော့နည်းလျှင်, ခရုအက်တမ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။ သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကိုနှင့်အတူဦးတည်သည့်အမည်ပေးခြင်းကိုစတင်အသုံးပြုသည်။ နောက်ဆက်တွဲလိမ်အက်တမ်များတွင်အရေအတွက်ကို၏နံပါတ်အရွယ်အစားအလွန်အရေးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့ကိစ္စများတွင်ပထမဦးဆုံးနှစ်, သုံး, လေးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို spiroatoms နေပါစေသူတို့ကိုရေတွက်ထားတဲ့ဦးတည်ချက်တူညီအရေအတွက်ပရိုဂရမ်လိမ့်မည်။ စာရငျးဦးတည်ချက်များရွေးချယ်ခြင်းဝက်အူအက်တမ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအရေအတွက်ကကြုံတွေ့သောအခါစာရငျးဖြစ်စဉ်ကိုရွေးချယ်သည်, အောက်ပိုင်းကိုရေတွက်လိမ်အက်တမ်၏ညှနျကွားရှေးခယျြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းဦးတည်ချက်အတွက်စာရငျးစနစ်ကလျှင်, အသီးအသီး spiroatom ၏နံပါတ် 3, 5, 7, 10 နှငျ့အခွားသောဦးတည်ချက်အတွက် spiroatoms ၏နံပါတ် 3, 5, 7, 9, ဒုတိယအရေအတွက်ထို့နောက်ဦးတည်ချက်ဖြစ်ပါတယ် ရှေးခယျြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပထမဦးဆုံးနံပါတ်၏ဦးတည်ချက်အတွက်နှစ်ခုလိမ်အက်တမ်အကြားအရေအတွက်ကို7နှင့် 10 နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အရေအတွက်ကဦးတည်ချက်အတွက်7နှင့်9ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်ဝက်အူအက်တမ်၏စာရငျးအရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါပြီးနောက်, နှင့်စာရငျးဦးတည်ချက်အရေအတွက်ကို9၏ညှနျကွားကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးစုံ spiro ကွင်း၏နာမ၌, ကွင်းအတွင်းပထမဆုံးအရေအတွက် spiro အက်တမ်အနီးဆုံးပထမဦးဆုံးလက်စွပ်အတွက်အက်တမ်အရေအတွက်ကတဦးတည်းဖြစ်၏။ ညွှန်ပြ ကျန်ရှိနေသေးသောနံပါတ်များ spiro အက်တမ်အကြားအက်တမ်၏နံပါတ်, ဒါမှမဟုတ် terminal ကိုလက်စွပ်အတွက်အက်တမ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ တစ်ခုချင်းစီအရေအတွက်ကကာလ (အင်္ဂလိပ်ကာလ) ကကွဲကွာနေသည်။ ဒီဥပမာမှာ, ပထမဦးဆုံး spiroatom (1) မတိုင်မီနှစ်ခုအက်တမ် (ရေတွက်2နှင့် 3) ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ3နှင့်4spiroatoms အကြားအဘယ်သူမျှမအက်တမ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တူညီတဲ့4နှင့် 5,5နှင့်6မှာ spiroatoms များအတွက်မှန်သည်။ ဒုတိယ terminal ကိုလက်စွပ်အပေါ်နှစ်ခုအက်တမ်,6နှင့် 5,5နှင့်4ရှိပါတယ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း,4နှင့်3အကြားတစျခုရှိတယျ။
ထို့ကြောင့် sequence ကို [2.0.0.0.2.1.1.1] ရယူသည်။ ညာဘက်အပေါ်ဥပမာမှာနှစ်ခု spiroatoms, ဒါနာမကို dispiro စတင်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး terminal ကိုလက်စွပ်ခုနှစ်တွင်နှစ်ခုအက်တမ်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. dispiro [2 ညွှန်း, ရှိပါတယ်။ ယင်းနောက်နှစ်ခု spiroatoms အကြားအခြား terminal ကိုလက်စွပ်အတွက်တဦးတည်းနှင့်လေးအက်တမ်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. နှစ်ခုခရု [2.1.35ထုတ်ဖော်, ရှိပါတယ်။ ဒုတိယ spiroatom,5ရေတွက် terminal ကိုလက်စွပ်အတွက်အက်တမ်၏နံပါတ်ပြီးနောက်အက်တမ်၏နံပါတ်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုအဖြစ်ထည့်သွင်းထားပြီး, နောက်ဆုံးသောအချိန်9နှင့် 10 spiroatoms အကြား3နှင့်5အက်တမ်ပေါင်းထည့်ပြီးတော့ရှိခြင်းတစ်ခု alkane add အဆိုပါ spiro ဒြပ်ပေါင်း၏အက်တမ်၏တူညီသောအရေအတွက်, decane, နာမတော်အားဖြင့်ထင်ရှား namedispiro [2.1.35.2 3] decane ။
spiro ဒြပ်ပေါင်းများ၏အထွေထွေ nomenclature
အဆိုပါ monospirocyclic ဝင်းလက်စွပ်ဖွဲ့စည်းရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကာဗွန်အက်တမ်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်အတိုင်းမိဘဟိုက်ဒရိုကာဘွန်၏နာမတော်ကိုဆုံးဖြတ်သည်; အဆိုပါ spiro လက်စွပ်ပေါ်တွင်အားလုံးအက်တမ်ငယ်လက်စွပ်၏အမိန့်နှင့်ကြီးမားသောလက်စွပ်အတွက်ရေတွက်လျက်နှင့် spiro အက်တမ်လျော့ချလျက်ရှိကြ၏ ထို့နောက်သူတို့ကစတုရန်းကွင်းခတ်နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်။ တစ်ခုလုံးကိုလက်စွပ်၏စာရငျး sequence ကိုအရအေတှကျအားဖွငျ့သကျဆိုငျရာ spiro အက်တမ်အကြားတည်ရှိနေပေမယ့်ကာဗွန်အက်တမ်များ၏အရေအတွက်အားဖြင့်ညွှန်ပြ, ပေါင်းတစ်ခုလုံးကိုလက်စွပ်မှသက်ဆိုင်ရာကွင်းဆက်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်၏အမည်များ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိ၏ ခရု [a, b] တစ်ဦး alkane: နံပါတ်များပုံစံအတွက်အနိမ့်အစက်ကကွဲကွာနေကြသည်။
တစ်ဦး heterospiral လက်စွပ်၏ anomeric အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာကိုက်ညီအီလက်ထရွန်နှစ်ခုအီလက်ထရွန်-အပြုသဘောအက်တမ်သို့မဟုတ်တည်းသောအားလုံးအတွက်အဆိုပါမော်လီကျူး၏ dipole ယခုအချိန်တွင်လျှော့ချနှင့် intramolecular စွမ်းအင်လျှော့ချရန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း။ ဆိုလိုတယ် 1968 ခုနှစ်, Descotes သုတေသနအဖွဲ့ကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ anomeric အကျိုးသက်ရောက်မှုအဆိုပြုထား။ သူတို့ကစက်ဘီး acetal ကိုလေ့လာတဲ့အခါသူတို့ကအဲဒီ isomer တစ်ဦးနှင့်အတူတည်ငြိမ်ခဲ့အချိုး trans ဆိုတဲ့ isomer အဆိုပါ CIS ပါရှိသော CIS isomer ၏ 57% နှင့် 43 C. မှာ equilibrium အရောအနှောအတွက် trans ဆိုတဲ့ isomer ၏ 80% အောက်ကပုံထဲမှာနှစ်ခုဒြပ်ပေါင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့ 0.71 ကီလိုဂျိုး / mol ၏စွမ်းအင်ခြားနားချက်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် CIS isomer ၏ anomeric အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, trans ဆိုတဲ့ isomer မျှထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။
တချို့ကခရုဒြပ်ပေါင်းများကိုတစ်ဦး axial chirality ရှိသည်။ Spiroatoms သူတို့ chirality စောငျ့ရှောကျဖို့လိုအပျလေးပါးကွဲပြားခြားနားသော substituents ကင်းမဲ့ပင်အခါ, chiral စင်တာများရှိနိုင်ပါသည်။ နှစ်ခုကွင်းအတူတူပါပဲသောအခါ, CIP စနစ်ကတဦးတည်းလက်စွပ်နှင့်အနိမ့်ကိုဦးစားပေးတစ်ဦးသည်အခြားလက်စွပ်၏ extension ကိုတိုးချဲ့ဖို့ပိုမိုမြင့်မားဦးစားပေးသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့။ လက်စွပ်ဆင်တူမပါသောအခါဒါဟာလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
• Alicyclic ဒြပ်ပေါင်း
ဒါကတစ်ဦး aliphatic ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်သိသိဒြပ်ပေါင်းနှစ်မျိုးလုံးသောအရာတစ်ဦးအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပြည့်သို့မဟုတ်သစ်ရွက် carbocyclic ကွင်းဆံ့ပေမယ့်ကွင်းမွှေးကြိုင်မရှိကြပေ။
လက်စွပ်၏အရွယ်အစားအရ, naphthenes, အသေးစားအလတ်စားနှင့်အကြီးစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ Cyclopropane နှင့် cyclobutane အသေးစားစဉ်းစားနေကြသည်။ ဘုံ cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane နှင့် cyclotridecane မှ cyclooctane အရွယ်အလတ်စားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပိုကြီးတဲ့ကြီးမားတဲ့ naphthenes ဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။
ဒါကတစ်ဦးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကာဗွန် Carbon-ကာဗွန်နှစ်ဆနှောင်ကြိုးရှိခြင်းဟာသိသိဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ဖြစ်ပါတယ်။ သိသိ polyenes cyclopropadiene, cyclobutadiene, cyclopentadiene ရှိစဉ်အခါရိုးရှင်းသောသိသိ monoolefins, cyclopropene, cyclobutene, cyclopentene နှင့် cyclohexene ပါဝင်သည်။ စောင့်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သော cyclobuteneand cyclopentene အဖြစ်အချို့သောသိသိ olefins, ပိုလီမာဖွဲ့စည်းရန် monomers အဖြစ် polymerized နိုင်ပါသည်။
အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အရေးအပါဆုံးမွှေးကြိုင်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ထိုကဲ့သို့သော Toluene, xylene, ethylbenzene နှင့်တူသောအဖြစ်က၎င်း၏ homologues benzeneand နေကြသည်။ မွှေးကြိုင်များတွင်အချို့သောမွှေးကြိုင်ကွင်းလုံးဝ benzene အဆောက်အဦများမဟုတ်ကြပေမယ့်သူတို့ကိုအတွက်ကာဗွန်အက်တမ်နိုက်ထရိုဂျင်, အောက်ဆီဂျင်ဆာလဖာနှင့်အခြားဒြပ်စင်များဖြင့်အစားထိုးနေကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သော furan တူသောငါးယွမ်အဖြစ် heterocycles, သူတို့ကိုခေါ်ပါ။ လက်စွပ်တစ်အောက်စီဂျင်အက်တမ်တို့ပါဝင်သည်နှင့် pyrrole တစ်နိုက်ထရိုဂျင် atom.Thiophene တစ်ဦးဆာလဖာအက်တမ်နှင့်တူသောပါရှိသည်ပါရှိသည်။
• Monocyclic မွှေးကြိုင်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်
• Polycyclic မွှေးကြိုင်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်
တစ်ဦးကွင်းဆက်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိခြင်းအဆိုပါမွှေးကြိုင်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ယေဘုယျအား aliphatic arenes အဖြစ်ရည်ညွှန်းနှင့်ဘုံ aliphatic မွှေးကြိုင်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန် Toluene, ethylbenzene, styrene, နှင့်တူကြ၏နေကြသည်။
• Heterocyclic ဒြပ်ပေါင်း
ဒါဟာ heterocyclic လက်စွပ်ဒါမှမဟုတ် substituent ဆံ့မခံပါဘူးတဲ့မွှေးကြိုင်လက်စွပ်ပါဝင်ပါသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာလူသိများသို့မဟုတ်အလားအလာကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်ကြသည်။ ဒီဓာတု၏အရိုးရှင်းဆုံးနှစ်ခုမွှေးကြိုင်ကွင်းနှင့်အတူ naphthalene, အဖြစ်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ဒြပ်ပေါင်းများ ruthenium နှင့် phenanthrene ဖြစ်ပါတယ်။
Polycyclic မွှေးကြိုင်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ကျောက်မီးသွေးနှင့်ကတ္တရာစေးသိုက်မှာတွေ့ရှိကြားနေ, Non-Polar molecules တွေဖြစ်ကြသည်။ မပြည့်စုံလောင်ကျွမ်းခြင်း (ဥပမာအင်ဂျင်နှင့်မီးရှို့ဖျက်ဆီး, စတာတွေဟာဇီဝလောင်စာလောင်ကျွမ်းအတွက်တဲ့အခါမှာတောမီးလောင်မှု) ကသူတို့ကအစအော်ဂဲနစ်တ္ထုများ။ ဥပမာ, ထိုကဲ့သို့သောထင်း, သစ်သားမီးသွေး, အမဲဆီနှင့်ဆေးရွက်ကြီးအဖြစ် carbonaceous လောင်စာ၏မပြည့်စုံလောင်ကျွမ်းခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ဒါ့အပြင် char အသားထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သုံးကွင်းအထက်တွင် Polycyclic မွှေးကြိုင်ဒြပ်ပေါင်းများကိုအနိမ့်နိုင်မှုနှင့်ရေအတွက်အနိမ့်အခိုးအငွေ့ဖိအားရှိသည်။ အခါမော်လီကျူးအလေးချိန်တိုး, နိုင်မှုနှင့်အခိုးအငွေ့ဖိအားကျဆင်းခြင်းနှစ်ဦးစလုံး။ စက်ဘီး polycyclic မွှေးကြိုင်ဒြပ်ပေါင်းများကိုအနိမ့်နိုင်မှုနှင့်အခိုးအငွေ့ဖိအားရှိသည်။ Polycyclic မွှေးကြိုင်ဒြပ်ပေါင်းများထို့ကြောင့်ပိုပြီးလေ့ရေနှင့်လေထုထဲတွင်ထက်မြေဆီနှင့်အနည်များတွင်တွေ့ရသည်။ သို့သော် polycyclic မွှေးကြိုင်ဒြပ်ပေါင်းများကိုမကြာခဏလေထုထဲတွင်ဆိုင်းငံ့မှုန်အပေါ်ကိုတွေ့နေကြပါတယ်။
အတော်များများက polycyclic မွှေးကြိုင်ဒြပ်ပေါင်းများကင်ဆာရောဂါကိုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများ polycyclic မွှေးကြိုင်ဒြပ်ပေါင်းများကိုမြင့်မားပြင်းအားမှရေရှည်ထိတွေ့မှုကအရေပြားကင်ဆာ, အဆုတ်ကင်ဆာ, အစာအိမ်ကင်ဆာနှင့်အသည်းကင်ဆာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ။ Polycyclic မွှေးကြိုင်ဒြပ်ပေါင်းများ, ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမျိုးဗီဇပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးတော်ကင်ဆာဆဲလ်များကြီးထွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
ယင်းမော်လီကျူးအလေးချိန်တိုးပွါးသောအခါ, polycyclic မွှေးကြိုင်ဝင်း၏ကင်ဆာကိုလည်းတိုးပွါး, ထိုစူးရှသောအဆိပ်လျော့နည်းသွားသည်။ တစ်ဦးက polycyclic မွှေးကြိုင်ဝင်း, Benzo [တစ်] pyrene (Benzo [တစ်] pyrene), ရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့ပထမဦးဆုံးဓာတုသည်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
polymerization သို့မဟုတ် solidification စဉ်အတွင်းပေါ်လီမာ၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုကျုံ့အရည်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ monomer မော်လီကျူးသို့မဟုတ် uncrosslinked ရှည်ကွင်းဆက်မော်လီကျူးအကြားဗန် der Waals အင်အားသုံးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့, နှင့်မော်လီကျူးများအကြားအကွာအဝေးကြီးမားသည် ဖြစ်. , polymerization သို့မဟုတ် crosslinking ပြီးနောက်, covalent နှောင်ကြိုးမှသာပေါ်လီမာပမာဏ၏ကျုံ့မှုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာယူနစ်များအကြား distances ။ ထိုသို့သော, ပုံပျက်သောအဆိုပါပေါ်လီမာ၏အရှိန်မြှအိုမင်းဖြစ်စေတဲ့အဖြစ်, ကျုံ့အဆိုပါပေါ်လီမာမှတစ်ခါတစ်ရံဆိုးဝါးကြောင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့နှင့်ခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျော့ကျနေပါတယ်။ ပေါ်လီမာတင်နိုင်၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုကျုံ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်, ဓာတုဗေဒ unremitting အားထုတ်မှုရာ၌ခန့်ထားပြီ, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်သာလျော့ချနိုင်ပြီးလုံးဝအသံအတိုးအကျယ်ကိုကျုံ့ဖယ်ရှားပစ်လို့မရပါဘူး။ 1972, Bailey et al အထိပါပဲ။ spiro ဒြပ်ပေါင်းများကိုတစ်စီးရီးဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ဤဒြပ်ပေါင်းများ polymerized ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ volume ကိုကျုံ့ပါဘူးသောအခါ, ချဲ့ထွင်။ တိုးချဲ့ monomers ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသိပ္ပံပညာရှင်အတော်များများကများ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်နှင့်သုတေသနတွေအများကြီးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Expanded monomers အလွန်တက်ကြွအလုပ်လုပ်တဲ့ပေါ်လီမာပစ္စည်းများကိုဖြစ်လာကြပါပြီ။ ထိုကဲ့သို့သော spiro orthoester နှင့် spiro orthocarbonate အဖြစ်စနစ်တကျဒြပ်ပေါင်းများကိုအကောင်းတိုးချဲ့ monomers များမှာနှငျ့ခှနျအားဖွဲ့စည်းမှု, မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် Binder, ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးပေါ်လီမာပစ္စည်းများကိုနှင့်ဆေးဝါးပေါ်လီမာပစ္စည်းများကိုမြင့်မား၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျ-ရည်ရွယ်ချက်ပိုလီမာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အုပ်စုများရှိခြင်း oligomers ၏ပေါင်းစပ်၏ပြုပြင်မွမ်းမံ။
ဖြစ်စေမထားတဲ့အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများအလင်းကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါနဲ့အလင်းထုတ်လွှတ်၏လှိုင်းအလျားနဲ့အလင်းထုတ်လွှတ်၏ထိရောက်မှုဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်အဓိကအားဖြင့်မူတည်သည်။ ချောင်းအများအားဖြင့်အီလက်ထရွန် conjugation အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ချောင်းထိရောက်မှုတိုးတက်လာဖို့အကျိုးရှိသည့်မော်လီကျူး၏ coplanarity, ပိုကောင်းစေပါတယ်သောတင်းကျပ်လေယာဉ်နှင့် conjugation စနစ်များနှင့်အတူမော်လီကျူးကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အများအပြားအော်ဂဲနစ်အလင်း-မှောင်မိုက်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်။ အဓိကအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်: spiro လက်စွပ်, Poly-p-phenylene vinylene, polythiophene, polythiadiazole နှင့်သတ္တုညှိနှိုင်းဒြပ်ပေါင်းများ။ ၎င်းတို့အနက် spirocyclic မွှေးကြိုင်ဒြပ်ပေါင်းများကိုကြီးမားတဲ့ conjugation စနစ်များနှင့်ကောင်းမွန်သောကျောမှုနှင့် coplanarity မြင့်မားဖန်အကူးအပြောင်းအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောအပူတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ အဆိုပါ EL device ကိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ရိုးရှင်းသောသည်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောပစ္စည်းကိရိယာများမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ကာလအတွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချဖို့နဲ့အလွယ်တကူကြီးမားသော-ဧရိယာ devices များပြင်ဆင်ထားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
hetero အက်တမ်များအဆိုပါ fused လက်စွပ်နှင့် spiro ဒြပ်ပေါင်းများကြောင့်လုပ်ဆောင်ချက်ဟာသူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ယန္တရားမှခုခံထုတ်လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါဘူးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပိုးသတ်ဆေးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျယ်ပြန့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိပါပြီ။ ဥပမာ: ကရူ et al ။ [3,9] အစီရင်ခံ 2,4,8,10-dichloro-3,9-tetraoxa-5.5-diphosphaspiro [3,9] undecane-3,9-ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ဆာလ်ဖိုက်မှရရှိပါသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တစ်ဝတ္ထု spiro ဝင်း synthesize မှတုံ့ပြန်ခဲ့သည် 3,9-dihydro-2,4,8,10-dithio-3,9-tetraoxa-5.5-diphospho undecane ။ ၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျထိရောက်စွာဂျုံ, စီရီရယ်, ဝါဂွမ်းနှင့်ပဲပုပ်ကနေစသည်တို့ကိုမုန်ညင်း, ragweed, ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည့် organophosphate ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်ပေါင်းသတ်ဆေး၏အသစ်တစ်ခုလူတန်းစားဖြစ်ကြသည်။
လွန်ခဲ့သော Previous post: 2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (ဓာတု abstraction န်ဆောင်မှုများ) Registry ကိုနံပါတ် 22536-61-4
နောက်တစ်ခု Next post: ကမ္ဘာ့ခုနှစ်တွင်သြဇာအရှိဆုံး Heterocycles
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Category ေရြးပါ CMO အကြောင်းအရာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိပညာ
2019 CNS ကုသမှုမူးယစ်ဆေး Monosialotetrahexosylganglioside ဆိုဒီယမ် (GM1) ဝက်ဦးနှောက် (37758-47-7)
သင်က Pyridines အကြောင်းသိထားဖို့လိုအားလုံး
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ဇြန္လ 2019 သြဂုတ်လ 2018 ဇူလိုင်လ 2018